हेनुहोस् तपाईँको क्षेत्रमा कस्तो बन्यो मतपत्र ? - Everest Dainik - News from Nepal
हेनुहोस् तपाईँको क्षेत्रमा कस्तो बन्यो मतपत्र ?
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर १० गते पहिलो चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ प्रयोग हुने मतपत्रकाे नमूना मत्तपत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
पहिलो चरणमा ३२ जिल्लाका ३७ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र ७४ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशसभा सदस्य चयनका लागि निर्वाचन हुँदैछ। यसपटक आयोगले उम्मेदवारी दिएका दलको मात्र चिह्न राखेकाले मतपत्र निकै छरितो बनेको छ।
याे पनि पढ्नुस २३ माघअघि सबै प्रदेशसभाको अधिवेशन, ३ फागुनभित्र मुख्यमन्त्री
अायाेगले जिल्ला अनुसार फरक फरक मतपत्र बनाएकाे छ । जसले गर्दा जुन जिल्लामा जतिवटा उम्मेदवार छन तिनकाे मात्रै चुनाब चिन्ह राखेर अायाेगले मत्तपत्र बनाएकाे छ ।
हेर्नुहोस् तपाईंको क्षेत्रमा कस्तो मतपत्र ?
याे पनि पढ्नुस प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको मत परिणाम एकसाताभित्र : आयोग
ट्याग्स: Nirwachan Ayog, Sample Matpatra